Boqolaal Muslimiin Ah Oo Shaqada Laga Eryay Dalka Maraykanka | Araweelo News Network
Boqolaal Muslimiin Ah Oo Shaqada Laga Eryay Dalka Maraykanka
COLORADO-USA(ANN)Dad Muslimiin Shaqaalle ah oo ka shaqaynayay Wershed Hilibka ah oo ku taal Dalka Maraykan gaar ahaa Gobolka COLORADO, ayaa shaqadii ay ka hayeen halkaa laga eryay.kadib markii ay awoodi waayeen inay cibaadaystaan.
Shaqaallahaa oo u baddan dad Soomaali ah, waxa tiradooda lagu sheegay ugu yaraan 200 Qof oo shaqaale Muslimiin ah, waxaana shaqada laga eryay markii ay shaqo joojin sameeyeen, iyagoo cabshooyin marar baddan soo noqnoqday ka gudbiyay fursada ay ku cibaadaysanayaan xiliga ay shaqada ku jiraan, balse maamulka Wershedda, ayaa dhamaantood shaqada ka caydhiyay.
Afhayeen u hadlay golaha xidhiidhka Muslimiinta Maraykanka oo lagu magcaabo, Jeylaani Xuseen, ayaa sheegay in shaqaallaha Warshadda Hilibka ee Cargill muddo loo oggolaa inay cibaadeystaan, balse ay hadda xaaladu is bedeshay.
Dhinaca kale Afhayeen u hadlay Warshadda Cargill, ayaa sheegay inay Warshaddu lahayd meelo lagu Tukado Salaada. Hase ahaatee isticmaalkooda loo bahan yahay in la waafajiyo baahida shaqada.
Doodo ayaa ka dhashay dadkaa Muslimiinta ah ee shaqada laga eryay, iyadoo arrintan lala xidhiidhiyay dunida reer galbeedka oo ay kusoo baddanay nacaybka islaamfobia oo cuqdad iyo cunsuriyad lagala hor yimi dhawrkii dhawr iyo tobankii sanadood ee u danbeeyay.